Dhalinyaro badan oo Kenyan ah oo qaatay tababar Milatari oo ay siiyeen Ururka Al Shabaab inay dib ugu laabteen gudaha dalka Kenya – STAR FM SOMALIA
Warbixin cusub oo ka soo baxday Hay’adda Socdaalka Aduunka ee loo yaqaan (IOM) ayaa lagu sheegay Dhalinyaro badan oo Kenyan ah oo qaatay tababar Milatari oo ay siiyeen Ururka Al Shabaab inay dib ugu laabteen gudaha dalka Kenya.
IOM ayaa sheegtay dhalinyaradan inay dib ugu noqdeen gudaha dalka Kenya, gaar ahaan Magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Kilifi iyo Kwale iyaga oo ujeedkooda uu yahay fulinta waxyaabihii loo soo tababaray.
Inta ugu badan dhalinyarada ku biirtay Shabaab ee tababarada Milatari helay ayaa la sheegay inay yihiin kuwa shaqo la’aanta haysa, kuwaasi oo camal ka dhigtay inay ku biiraan Shabaabka Somaliya ka dagaalama.
185 ka mid ah Dhallinyaradan ku laabtay Kenya ayaa ka mid ahaa dadka lagu wareystay Warbixintan waxaana ay 30% ka yihiin 700 ee tababaratay kuna laabtay Kenya si ay u fuliyaan ujeeddooyinka Al-Shabaab.
Tirada Dhalinyarada warbixinta lagu sheegay ayaa waxa ay walaac ku abuurtay Dowladda Kenya oo hada la daalaa dhaceysa suggida ammaanka dalkeeda oo ay ka dhacaan falal lidi ku ah oo Shabaabka ay geystaan.
Warbixinta ka soo baxday Hay’adda Socdaalka Aduunka oo ka koobneyd 36 Bog ayaa sidoo kale lagu sheegay dhalinyaradan inay yihiin kuwa Kenyan ah oo tababarada ku qaatay Xerooyin Shabaabka ay ku leeyihiin dalka Somaliya, kadibna loo diray gudaha dalka Kenya si ay weeraro u geystaan.
Dadka ku biiraya Al-Shabaab waxaa ay da’doodu u dhaxeysaa 24-34 jir sida ay muujisay Warbixinta ay soo saareen Hay’adaha IOM iyo Golaha Culimada Islaamka Kenya.
Kenya ayaa u muuqata mid la wareersan qaabkii ay u sugi laheyd ammaanka dalkeeda, maadaama dadka loo adeegsado ay yihiin muwaadiniin dalkeeda u dhashay oo fekerka Shabaab lagu beeray, kadibna tababaro la siiyay.